Angangoita mazana matatu Emapoka Ekurima Anokurudzira Seneti Chiito Pa Ag Labor Reform - Potatoes News
Washington, DC (Chikumi 9, 2021) - Nezuro, mazana masere nemasere emasangano ezvekurima anomiririra kusiyaniswa kwenzvimbo uye zvigadzirwa zvevarimi venyika yedu vakakurudzira danho reSeneti nekukurumidza nekupasisa mutemo unogadzirisa shanduko yevashandi vezvekurima. Iko kufona kwakauya mutsamba yakanyorerwa hutungamiriri hweSeneti uye ikagoverwa kune vese maseneta.
“Varimi vemuAmerica vakatarisana nedambudziko rekuparadzwa: COVID-19 denda, njodzi dzakakomba zviitiko zvemamiriro ekunze, mitero yekudzorera mumisika yedu yepamusoro yekutengesa kunze, nekuderera kwemitengo yezvinhu uye mari yepurazi kungotaura mashoma. Zvisinei, kushomeka kwevashandi mudzimba kunoramba kuri rimwe rematambudziko avo, kuri kukanganisa varimi nhasi uye kuisa njodzi mune ramangwana rekurima kweAmerica, ”akadaro mapoka. "Tinofanirwa kugadzirisa dambudziko revashandi iri kutyisidzira mapurazi muUnited States kuti vagadziri vedu varambe vachipa chikafu, nekupfekedza, nekupa mafuta kurudzi rwedu."
Tsamba iyi inocherekedza kusava nechokwadi kwevashandi vemumapurazi pari zvino munyika yese vanotarisana uye nekurwira vashandirwi vezvekurima vanoramba vainavo mukuzadza mabasa pachena. Iwo mapoka zvakare anoratidzira matambudziko akareba neiyo yazvino H-2A muyenzi mushandi vhiza chirongwa chekurima, kusanganisira kunetsekana kwemutengo uye chokwadi chekuti vagadziri vane gore-rose rebasa zvinodiwa havana mukana kuchirongwa.
"Pasina danho rakakurumidza kuitwa neSeneti, hurumende yemubatanidzwa yechinyakare nemabatiro akapinda munyika anozomanikidza varimi vazhinji kuti vafunge kana vachigona kuenderera mberi nekurima kwakanyanya." Inopedzisa tsamba. "Sevamiriri vemasangano ezvekurima muUnited States mose, takamirira kukubatsirai kuti mugadzirire nekupasisa mutemo kunyatsogadzirisa zvido zvevarimi vekuAmerica nekusimbisa vashandi varipo, kugadzirisa mari zhinji yekushandisa chirongwa cheH-2A, nekugonesa gore- vagadziri vakakomberedza kuti vawane chirongwa cheH-2A. ”
Chinyorwa chetsamba chinogona kuwanikwa pano.
Tsamba iyi yainge yakarongedzwa ne kurima Workforce Coalition (AWC), iyo inounza pamwechete masangano anomiririra zvakasiyana zvinodiwa nevashandirwi vekurima munyika yese. AWC inoshanda senzwi rakabatana rezvekurima mukuyedza kuona kuti varimi veAmerica, vafudzi nevarimi vanowana mukana wevashandi vakagadzikana uye vakachengeteka. Pamusoro petsamba iyi, nhengo dzeAWC Steering Committee dzakawedzera mafoni avo kuSeneti.
Zippy Duvall, mutungamiri, American Farm Bureau Federation: “Shanduko kuhurongwa hwedu hwekupinda nekubuda kwevanhu uye chirongwa chevashanyi ndezvekare. Kushomeka kwevashandi uye mibairo isingatarisirwi inoganhurira kugona kwevarimi kusimudzira mabhizinesi avo uye kunogadzira kusagadzikana munzvimbo yatove yakaoma yehupfumi. Tinokurudzira kongiresi kuvandudza chirongwa chedu chazvino chevashanyi nevashandi uye nekupa nzira yekugonesa vashandi vedu varipo kuti varambe vachishanda mune zvekurima kuona kuti mapurazi emhuri anokwanisa kuramba achizadzisa zvido zverudzi rwedu rwuri kukura. "Tinomira takagadzirira kushanda nevatongi vemitemo pakuchinja uku kwakakosha."
Mike Joyner, purezidhendi, Florida Zvibereko & Vezvirimwa Association: “Zvidzidzo zvakawanda zvakadzidzwa mudenda iri, asi zvishoma zvakakosha kudarika kudiwa kwevarimi vekuUS kuti vape mhuri dzeUS. Pasina mukana wevashandi vakagadzikana, zviri pamutemo, varimi veFlorida havazokwanisi kudyara nekukohwa zvirimwa zvavo uye kubatsira kuisa chikafu chinovaka muviri pamatafura evatengi veAmerica. Bipartisan nzira muSeneti yekugadzirisa zvinetswa zvevashandi vekurima zvinokanganisa varimi kudunhu reUS zvakakosha uye zvinoda kukurumidza. "Tinokurudzira zvikuru Seneti kuti ikurumidze kugadzirisa dambudziko iri revashandi uye tinotarisira kushanda nevatungamiriri muitiro wese wemutemo kubatsira kuchengetedza kugona kwevarimi vekuAmerica kurima chikafu."
Chuck Conner, mutungamiri & CEO, National Council of Farmer Cooperatives: “Varimi nevafudzi vemunyika vakatarisana nedambudziko revashandi iro rinotyisidzira kugona kwavo kupa chikafu, kupfekedza nekupisa nyika. Tsamba yakatumirwa kuSeneti nguva dzakapera nezuro inoratidza hupamhi hwekutsigirwa kwekushandurwa kwevanhu uye kuti iyi nyaya haisi yakanangana nezvinhu zvishoma chete kana matunhu enyika. "Tinokurudzira Seneti kuti itange nekugadzirisa mabasa pasina kunonoka uye kutarisira kushanda nevatungamiriri vakuru pakagadziriswa gakava uye gakava."
Rob Larew, purezidhendi, National Farmers Union: “Sangano revashandi vepapurazi rinofanirwa kunge richishanda kuvarimi uye richinzwira tsitsi vashandi vemumapurazi, uye rinofanira kupa chokwadi kune vese mapato - asi parizvino, hapana zvarinotaura pamusoro apa. Kunyange isu tichikurudzirwa nezvakavimbiswa munguva pfupi yapfuura kuti matambudziko aya achagadziriswa, hatichamiriri kuita chimwe chinhu zvakare. "Congress inofanirwa kukurumidza kugadzirisa zvikanganiso zvataurwa mutsamba yedu uye nekuona kuti zvido zvevarimi nevashandi zvazadzikiswa."
Jim Mulhern, mutungamiri & CEO, National Milk Vagadziri Federation: “Dambudziko revashandi vekuAmerica rekurima rinongowanda gore rega rega, uye varimi nevashandi vemumapurazi havachakwanise kukumbirwa kuti vatsungirire. Mamiriro acho akanyanya kunetsa kune vagadziri vemukaka, vasingakwanise kuwedzera vashandi vavo vekumba nevashandi vevaenzi. Mamiriro acho haagone kushanda; Congress inofanira kuita. Ag mutemo wevashandi wekugadzirisa mutemo uri kuibva, pamwe nematanho ebipartisan akatopfuudzwa muImba uye bipartisan immigration reform hurukuro dziri kuitika muSeneti. Dare reSeneti parizvino rinofanirwa kufambisa danho rayo rekushandurwa kwevashandi, uye tinoshevedza Seneti kuti itore danho iri risingawanzo rekuti mukana uvhare. "Tinofanira kutora mukana uno usingawanzogadziriswa kugadzirisa dambudziko iri nekutsigira varimi nevashandi vemumapurazi kuti varambe vachipa America nenyika."
RJ Andrus, Idaho anorima mbatatisi uye mutevedzeri wemutungamiriri wezvemitemo nehurumende, National Potato Council: “Varimi vembatatisi vemuAmerica vanoramba vakazvipira kudzika mutemo wekugadzirisa dambudziko revashandi rakatarisana nevarimi vekuAmerica. "Tinotenda nemoyo wese zvakaitwa naSenator Mike Crapo (R-Idaho) naSenator Michael Bennet (D-Colorado) mukutora dambudziko iri rekuumba bhiri rinochengetedza nyika yedu uye rinotsigira zvekurima zveUS nevashandi vekuAmerica vanokosha mumapurazi."
Tom Stenzel, mutungamiri & CEO, United Fresh Produce Association: “United Fresh Produce Association yakagara ichikurudzira kuvandudzwa kwenzira yedu yekuve vanhu vekune dzimwe nyika kuti tione kuti tave nevashandi vekupa chikafu nyika yedu, nepasi rose. "Takaita fambiro mberi huru muImba yeVamiririri kuburikidza nekupfuudza bipartisan shanduko uye ndinotenda zvakakosha kuti Seneti itore nyaya iyi ipasise shanduko dzakadarikidza kwenguva yakareba nenzira imwecheteyo."
Jim Bair, mutungamiri & CEO, US “Gore rega rega varimi vanosangana nedzvinyiriro kubva kuzvikwereti zvekushandisa, mamiriro ekunze, tupukanana netwumazamu-tushoma Ivo havafanirwe kushushikana nezvekusiya maapuro pamiti nekuti vakatadza kuwana vashandi kuti vazvikohwe. Asi ndizvo chaizvo zvinoitika, uye zviri kutyisidzira ramangwana remaapuro indasitiri. "Tiri kudaidzira Congress kuti itore danho uye kuti Seneti isvike pachibvumirano chevaviri vanokwanisa kusaina mutemo."
Dave Puglia, mutungamiri & CEO, Western Varimi: “Dare reseneti rinogona kupedza dambudziko revashandi mumapurazi eAmerica. Varimi vedu havagone kubhadhara rimwe gore rekusaita. Imba yakapasisa iyo Farm Workforce Yemazuva ano Mutemo kutanga kwegore rino, yakanyatso kutaurirana bipartisan mutemo uyo waizopa kugadzikana kune varipo varimapurazi vashandi uye yakagadziridzwa zvikuru uye inofungidzirwa chirongwa chevashandi vevaenzi. Tinoshevedza maSeneta emapato ese kuti vabate nguva iyi, vatore nyaya iyi vakatendeka, uye vagadzirise nekukanganisa kunodiwa kuti vapasise Seneti. ”
Tags: Ag Basa RekuchinjakurimaSenate
Smartphone - iri nyore dhata-inotsigira data
TNA INOTANGA ZVITSVA ROBAG 5 AT SNAXPO 2018